Dhuusamareeb: Ahlu-Sunna oo ku dhawaaqaday Baarlamaan cusub – Radio Daljir
Dhuusamareeb: Ahlu-Sunna oo ku dhawaaqaday Baarlamaan cusub
Janaayo 28, 2020 5:00 g 0
Ahlu-Sunna Waljamaaca oo haatan ah garab diidan hab-dhismeedka iyo hannaanka loo maamulayo doorashada maamulka Galmudug ayaa maanta ku dhaawacay 69 xubnood oo ay tilmaameen in ay yihiin baarlamaanka rasmiga ah ee maamulka Galmudug.
Ahlu-Sunna ayaa horay u haysatay 20 xubnood oo kamid ahaa Baarlamaanka labaad ee Galmudug ee dhawaan la dhaarshay, horayna qoonda ahaan loo siiyey, balse xildhibaannadda Ahlu-Sunna waxay ka leexdeen Baarlamaanka intiisii kale kadib markii la isku khilaafay doorashadii guddiga doorashada Madaxweynaha iyo Kuxigeenka.
Tirada guud ee hadda Ahlu-Sunna ay u tirinayso ayaa ah 89 xubnood oo ah tirada guud ee Baarlamaanka Galmudug ee dastuurka ku cad, waana 69 ay maanta liiskooda shaaciyeen iyo 20 ay horay u haysteen Ahlu-Sunna.
Liiskaan cusub ee xildhibaananda ee maanta ay shaacisay Ahlu-Sunna ayaa imaanaya iyadoo loo madlanyahay doorashada Madaxweynaha iyo Kuxigeenka Galmudug in ay dhacdo 30ka bishaan aynu ku guda jirno ee Janaayo 2020.
Mugdi badan ayaa hareeyey doorashada maamulka Galmudug, mana cadda meesha xaalku uu ku dambayn karo, waxaana jira khilaafyo wajiyo badan oo ka dhax aloosan dhinacyada siyaasadeed ee ku loolamaya hoggaanka maamulka Galmudug.
Maxamed Yaxye oo kamid ah Ahlu-Sunna Waljamaaca ayaa ku dhawaaqay shaacinta Baarlamaanka cusub ee ay soo xuleen.
Siyaasadda & Dhaqaalaha 479 Wararka 20745
Beesha caalamka oo war kasoo saartay xaaladda jahwareersan ee Galmudug
Bangiga dhexe ee Somaaliya oo war ka soo saaray dab ka kacay xalay Xarunta Bangiga